बाँसबारी वितरण केन्द्रबाट मेलम्चीको पानी वितरण गरिने क्षेत्र – WASHKhabar
२३ चैत्र २०७७, सोमबार ०९:१५ 13233 पटक हेरिएको
काठमाडौ : आज बाँसबारी वितरण केन्द्रबाट मेलम्चीको पानी वितरण गरिदैछ । रातभरको मेहनतपछि बॉसबारी रिजर्भ्वायरमा पानी हाल्न सफल भएको खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले जानकारी दिनुभयो । बाँसबारी वितरण केन्द्रबाट यसअघि १० दिनको फरकमा पानी वितरण गर्दै आएको थियो । सचिव बेल्बासले बॉसबारीबाट पानी प्राप्त गर्ने सम्पुर्ण उपभोक्तालाई बधाई व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यी हुन्, बाँसबारी रिजर्भ्वायर बाट पानी वितरण हुने क्षेत्रहरु
नरदेबि, रक्तकाली, किलागल, यट्खा, न्हयोखा, गल्कोपाखा ओरालो, क्षेत्रपाटी, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ कालधारा सबै, कुश्लेचौर, धोबीचौर, खुशिबु, ढल्को । महापुरमार्ग, बांसवारी लोकल कपनमार्ग, पीपलबोट, धारापाटी, बसुन्धारा पश्चिम क्षेत्र, महाराजगंंज बजार, मिलिजुलीटोल, जलधारामार्ग ४” सितलनिवास, बालुवाटार ३ नं. गेट माथी, जलधारा ३” सितलनिवास, बालुवाटार हुंदै भाटभटेनी, श्रीमार्ग हुंदै साकुनामार्ग, टुंडालदेवी, विशालनगर ।
लाजिम्पाट क्षेत्र, खोलागाल, नानीगञ्ज, गैरीधारा, खुर्सानीटार, निल सरस्वती मार्ग ३” सामाखुसी दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्र, अल्काबस्ती, कपुरधारा, रानीवारी, निल सरस्वती स्थान (४”), गाेंगबु प्लटिङ्ग पकनाजोल, सोह्रखृुट्टे, द्योवु टोल, सामाखुशी लैनचौर, ब्रिटीस चिहान ।
भगवानबहाल, ड्राईभर लाईन, सामाखुसी, मनोहर लाईन, जलधारा, खोर्सार्नीटार ६”, नर्सरीगल्ली, लाजिम्पाट क्षेत्र, कुसुमबिलाछि, नघल, साउनेपाटी, क्षेत्रपाटी ।